छिट्टै रुने व्यक्तिलाई कहिल्यै पनि कमजोर नसोच्नुस् - टि. एल. एन पोस्ट
Home Uncategorized छिट्टै रुने व्यक्तिलाई कहिल्यै पनि कमजोर नसोच्नुस्
ल्म हेर्दा होस् या किताव पढ्दा । कसैसँग कुराकानी गर्दा नै किन नहोस्, कोही व्यक्ति यस्ता हुन्छन् भावनात्मक विषयमा आँसु झारिहाल्छन् । फिल्मका इमोशनल दृश्य हेर्दा यस्ता व्यक्तिको आँखामा आँसु देखिहालिन्छ । केटाले रुँदा धेरैले ‘केटा भएर पनि रुन्छन् ?’ भन्छन् भने केटीले रुँदा सम्झाउने कोशिष गरिन्छ ।
भनिन्छ कि रुनु तनाव भागउने सबैभन्दा उत्कृष्ट उपाय हो । यदि तपाई तनावमा हुनुहुन्छ र त्यसलाई दूर गर्न सकिरहनु भएको छैन भने तपाईको मनमा नकरात्मक कुराले बढी स्थान लिन्छ । जसका कारण तपाईं विभिन्नखाले रोगको चपेटमा पनि आउन सक्नुहुन्छ । यसकारण तनावका बेला केही समय रुनुहोस्, जसले तपाईको मन हलुको हुनेछ । एजेन्सी
Previous articleवर्षाको व्यंग्य – नेतालाई पढाउने र बुझाउने तालिम केन्द्रको लागि पनि बजेट छुट्टाउनुपर्ने
Next articleवनमन्त्री मन्त्री आलेले आफ्नै सल्लाहकारकी पत्नीलाई दिए राजनीतिक नियुक्ति
रामकली छ दिनदेखि सम्पर्कविहीन
मोबाइल पसल चलाउने लाभ सिंह जसले पञ्जाबका मुख्यमन्त्रीलाई हराए
निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि दियो समय
मुर्दा उठेर चितामा बसेपछि
‘छड्के २.०’ को लागि कलाकारको खोजी